Nagu saabsan - Changzhou Jiashun Qalabka Waxyaabaha Cusub ee Teknolojiyada Co., Ltd.
Changzhou Jiashun Waxyaabaha Cusub ee Teknolojiyada Co., Ltd.
Changzhou Jiashun Waxyaabaha Cusub ee Teknolojiyada Co., Ltd. oo la aasaasay 2015, waa soo saare ku takhasusay soosaarka iyo iibinta alaabada fiber galaaska. Waxay ku taalaa Changzhou, oo ah caasimada dhaqanka qadiimiga ah ee Shiinaha, koonfurta wabiga Yangtze iyo xeebta harada Taihu, oo ku taal bartamaha wabiga Delta Yangtze. Waxay u dhigantaa Shanghai iyo Nanjing. Waxay ku dhowdahay waddada weyn ee weyn ee 312 iyo waddada weyn ee webiga, oo leh gaadiid ku habboon.
Shirkaddu waa qayb ka mid ah wax soo saarka iyo farsamaynta, cilmi baarista sayniska, iibka oo ka mid ah shirkadaha hal-abuurnimada farsamada.
Waxyaabaha ugu muhiimsan: maro fiber galaas warshadaha, maro fiber elektarooniga ah maro, silikoon maro fiber fiber galaas, silikoon maro caag fiber galaas, maro fiber dahaarka leh muraayad, maro fiber galaas fluororubber, Metro flange silikoon fiber goomaha, dabka diidan dabka diidan dabka, maro dabka dabka dabka dabka , Tuubo caag ah oo silikoon ah, marada silica sare, bustaha dabka, bustaha dabka alxanka, marada dab-demiska, dhamaan noocyada dhalada dhalada ah ee la dareemo, muraayadda silig birta ah ee birta ah, silig heerkulkiisu sareeyo waxyaabaha fiber fiber. Codsiyada waxay daboolayaan batroolka, warshadaha kiimikada, dhismaha markabka, awooda kuleylka, tamarta nukliyeerka, qalabka hawo bixinta, qalabka la dagaalanka dabka, badbaadada iyo ilaalinta shaqaalaha, tuubada kuleylka, tareenka xawaaraha sare leh, duulista, macdanta, dhalaalida iyo warshadaha kale. Shirkaddu had iyo jeer waxay u qaadataa "tayada ugu horreysa, marka hore macaamiisha" mabaadii'deeda.
Ujeedada shirkaddu waa inay siiso macaamiisha qalab tayo sare leh oo daboolaya fiilooyinka, aalado heer sare ah oo dabka lagu kalsoonaan karo, inay u abuuraan goob shaqo badbaado iyo tamar-badbaadin leh dadka isticmaala, horumarinta shirkadaha ayna wax ku biiriyaan bulshada.
In la dhiso shirkad hal-abuurnimo ah oo kaarboon kaarbooni ah oo hal-abuur cusub leh iyo summad duurka ku jirta oo ah fiber heerkulkiisu sarreeyo.
Tayada marka hore, marka hore macaamilka, marka hore tayada, ilaali balanta.
Ruuxda ganacsigu waa hawlkar, u heellan, ku dhiiran inuu qaado mas'uuliyad, adayg iyo dagaal badan, ku dhiiran inuu shaqeeyo, kuna saleysan barta bilowga, xaaladna abuuro
Abuur alaab-qeybiyaha galaaska-koowaad.
Toogashada dhabta ah ee geedka